ब्लगहरूबाट उच्च पीआर डाइफाइक ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्ने तरिकाहरू के हो?
Commentluv ब्लग एक सही तरिका को गुणवत्ता प्राप्त गर्न को लागि उच्च पीआर पश्चलिंक जो सामान्यतया मेरो वेबमास्टरहरु लाई छोड दिए छ. यस विषयको छलफल गर्न सधैँ विरोधाभास हुनेछ. Commentluv ब्ल्याकहरूले आफ्नो मालिकहरूलाई वेबसाइट मालिकहरूको लागि उपलब्ध गराउँछ किनभने तिनीहरू शक्तिशाली लिङ्कहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ किनकि उनीहरूले तपाइँलाई तपाइँलाई एक ब्लग पोष्टको एक लिङ्क बिन्दुमा फिर्ता लिनु भएको छ।.
यस आलेखमा, हामी केहि आवश्यक तरिकाहरू छलफल गर्नेछौं कि टिप्पणीलोभ ब्लगबाट उच्च पीआर डाइफाइक ब्याकलिङ्कहरू कसरी बनाउने.
आउनुहोस् पहिला हामी टिप्पणी गर्ने बारे टिप्पणी गर्दछौं कि टिप्पणीलिभ ब्लगहरू र उनीहरूलाई कहाँ भेट्टाउन सकिन्छ. ब्लगहरूको यी प्रकारले तपाइँलाई तपाइँको ब्लग पोष्टहरू एकै ठाउँमा लिङ्क गर्न र तपाइँको वेब पेजहरूमा गुणस्तर लिङ्कको जुनसुरक्षा गर्न अनुमति दिन्छ. धेरै वेबमास्टर्सहरूले दावा गर्छन् कि DoFollow ब्याकलिङ्कहरूसँग कुनैफ्याबिङ भन्दा वेबसाइट अनुकूलनका लागि बढी मूल्य छ. तथापि, यी दुवै प्रकारका जैविक ट्राफिक प्राप्त गर्नका फाइदाहरू छन्. गुणस्तर लिङ्क प्रोफाईल सिर्जना गर्न, तपाइँलाई दुरुपयोग र ब्याकलिंक दुवै फाईलहरू सिर्जना गर्न आवश्यक छ. एक नियमको रूपमा, उच्च पीआर साइटहरूमा ब्याकलिङ्कहरू फिर्ता गर्न नयाँ डाइफाइबिक ब्याकलिङ्कहरूको कारण र वेबसाइटमा ट्राफिक प्रवाह बढाउँछन्. यदि तपाइँ आफ्नो ब्लगहरू वा वेबसाइटहरूमा ब्याकलिङ्कहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई ध्यान राख्नुपर्छ कि ब्याकलिङ्कहरू राम्रो-विचार-विचार-आउट रणनीतिमार्फत गरिनेछ किनभने यो तपाईंको ब्लगको दृश्यतामा सुधार गर्दछ।.
मलाई नील पटेल विचार को निर्माण को लिंक को रुचि छ. उनले स्केलेबल बाटोमा लिङ्कहरू निर्माण गर्ने विचार पत्ता लगाए. यो विधिले तपाईंलाई तपाईंको प्रदर्शनको ट्रयाक गर्न र एक योजना काम गरिरहेको बेला सम्भव सम्भावनाको मौका प्रदान गर्दछ.
सामाजिक बुकमार्किंग साइटहरू
Google बारम्बार श्रेणीबद्ध एल्गोरिथ्म अद्यावधिकहरूको कारणले गर्दा अधिकांश ब्लगिङले खोजी इन्जिनहरूको लागि संदिग्ध हेर्नको लागी प्राय: लिंकहरू अनफिग गर्न निर्णय गर्दछ।. यद्यपि, केही टिप्पणीब्लु ब्लगहरू अझै उपलब्ध छन् र वेबसाइट मालिकहरू उच्च-गुणस्तर dofollow ब्याकलिङ्कहरू प्रदान गर्छन्.
सामान्यतया, ब्लग पोस्टिंग ब्याकलिंकहरू सिर्जना गर्न सजिलो तरीका हो. यो विधि धेरै सफलतापूर्वक वेबमास्टरहरू द्वारा जाँच गरिएको थियो, र यदि यो ठीकसँग सम्पन्न हुन्छ, यसले ट्राफिक, दर्जा, र रूपान्तरणको सम्बन्धमा राम्रो परिणाम ल्याउँछ।. तपाईंले लिङ्क निर्माणको सम्बन्ध सम्बन्ध निर्माणको माध्यमको रूपमा लिन आवश्यक छ. सुरुमा, यसले तपाईंलाई फाइदा दिनेछैन. यद्यपि, लामो समयसम्म, तपाई प्राधिकरणको निर्माण गर्न र तपाईंको वेबसाइटमा ट्राफिक वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ.
केहि ब्लगरहरूले प्रत्येक लेखका लागि टिप्पणीहरूको संख्या सीमित गर्छ. तिनीहरू केवल पहिलो टिप्पणीकारहरूको लागि backfollow ब्याकलिङ्कहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ. ब्लगको प्रशासकले व्यक्तिगत रूपमा निर्णय गर्दछ कि के तपाईलाई dofollow अनुक्रमणिका अनुमोदन गर्ने वा छैन. यदि तिनीहरूले तपाईंको साइटबाट केही स्पैम कार्यहरू देखाउँछन् भने, उनीहरूले प्राय: तपाइँले आफ्नो ब्लगमा डाउफाइक ब्याकलिङ्कहरू राख्नु भएन. यद्यपि, यदि तिनीहरू तपाईको टिप्पणी कार्बनिक र छलफल गरिएको विषयसँग सम्बन्धित छन्, उनीहरूले तपाइँलाई उनीहरूको ब्लगहरूमा टिप्पणी गर्दा प्रत्येक पटक ब्याकलिंकलाई पुरस्कार दिनेछन्।.
Commentluv ब्लग्स मा Dofollow बैकलिंक बनाउन युक्तिहरु
सबै भन्दा पहिले, स्पैम को देखने को कोशिश न गर्नुहोस. ब्लगमा राम्रो प्रतिष्ठा सिर्जना गर्न, तपाईंलाई गुणस्तर र उपयोगी टिप्पणीहरू छोड्न आवश्यक छ. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईलाई सावधानीपूर्वक एक लेख पढ्न र विषय बुझ्नुहोस्. अन्यथा, तपाई टिप्पणीहरू लेख्नुहुन्छ जुन बिन्दुमा रहँदैन र अनैतिक हो. यसबाहेक, तपाईंको उद्योगलाई अप्रासंगिक लेखमा टिप्पणीहरूमा तपाईंको अनलाइन व्यवसायलाई विज्ञापित गर्ने प्रयास नगर्नुहोस्. तपाईं यसका लागि हटाइने छ र यस ब्लगमा ब्याकलिङ्कहरू dofollow प्राप्त गर्ने मौका कहिल्यै पाउँदैन. तपाईंले लिंक ब्याकलिङ्कको साथ अधिवेशन गर्न प्रयास गर्नु हुँदैन किनकि यो अनैतिक र स्प्यामी हेर्न सक्छ. यसबाहेक, म तपाईंलाई सल्लाह दिन्छु कि एक र दुई वटा टिप्पणी टिप्पणीहरू टाँस्न Source .